Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1036
Famoahana harem-pirenena an-tsokosoko : 18 kg ny volamena tratran’ny mpiasan’ny ladoany teny Ivato
Par Taratra sur 23/01/2017 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Mitohy ihany ny fanondranana volamene an-tsokosok eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Misy ny tratra fa ao koa ny tafavoaka. Ny asabotsy 21 janoary faran’ny herinandro lasa teo, voasakan’ny mpiasan’ny fadintseranana teny Ivato ny saika hoentina amin’ny zotra Kenya Airways. Mendri-piderana ny mpiasan’ny fadintserana nahavita ezaka toy izany. Volamena 18 kg, mitentina 2, 250 miliara […]
Perspectives du MAE : associer la diaspora au développement
Par Taratra sur 21/01/2017 NS Français, Opinion
La diaspora au service du développement et les aspects socioéconomiques de la diplomatie sont les deux axes majeurs du ministère des Affaires étrangères cette année. La diaspora sera au centre des actions de la diplomatie malgache cette année. C’est l’un des principaux messages annoncés par la ministre des Affaires étrangères Béatrice Atallah, hier, à Manandona, […]
Mpilalao rugby fahiny, mpanazatra, mpitantana : « Aoka tsy hahemotra intsony ny fifidianana »
Par Taratra sur 21/01/2017 NS Malagasy, NS-Sports
Nivoaka amin’ny fanginany. Naneho ny heviny tetsy Analakely omaly, ireo solontenan’ny mpilalao tranainy sy mpanazatra ary ny mpitantana klioba eto Analamanga, eo amin’ny taranja Rugby. Niompana amin’ny resaka fifidianana ny ho filohan’ny federasiona ny fanehoan-kevitr’izy ireo. Tsy te hiaina savorovo intsony. « Mahatsapa sy malahelo izahay fa mety ho potika indray ny rugby Malagasy, tsy afa-mipetra-potsiny […]
Handball tompondaka eran-tany : mihatsara ny zava-bitan’i Frantsa
Nahavita ezaka tsara ny ekipa frantsay nandritra ny fihodinana voalohany, tao amin’ny vondrona A nisy azy. 154 ny baolina tafiditra, tsara ny vita tamin’izany dingana voalohany izany raha ampitahana ny tany Qatar, 143 ny baolina maty. Ny fihaonana tamin’i Pologne ihany no tsy nihoatra ny 30 ny baolina matin’i Frantsa (26-25). Anisan’ny nahiratra indrindra koa […]
Fizahantany 2010 – 2016 : nanome tarehimarika be indrindra ny taona 2016
Par Taratra sur 21/01/2017 Economie, NS Malagasy
Nampahafantatra ny tarehimarika taona 2016 ny minisiteran’ny Fizahantany, omaly. 293.185 ny isan’ny mpizahatany tonga teto amintsika, ny taona lasa iny, nanantombo 20 % raha oharina ny tamin’ny taona 2015. Io ny tarehimarika avo indrindra nandritra ny fito taona, nitondra 702 tapitrisa dolara tao anatin’ny harinkarena faobe (PIB), araka ny tatitra navoakan’ny minisiteran’ny Fizahantany ireo vahiny […]
Avy amin’ny Vivo Energy : nahazo latabatra, seza ny sekoly ao Anosy Avaratra
Par Taratra sur 21/01/2017 Faits Divers, NS Malagasy
Nanolotra latabatra sy seza fianarana ho an’ny sekoly enina ao anatin’ny kaominina Anosy Avaratra ny orinasa Vivo Energy tamin’ity herinandro ity. Nandray ny fitaovana ny lehiben’ny zone d’administration pédagogique (Zap) ao Lazaina. Hahazo tombontsoa amin’ny fitaovana vaovao 185 ny mpiantra 1 965 amin’ny sekoly enina. “Manohana betsaka ny fampianarana ny orinasa Vivo Energy izay miantefa amin’ny […]
Ankadindramamy…. : nahato ny fanorenana tsy ara-dalàna
Nijery ifotony ireo taratasy fahazoan-dalana hanorina trano eny Ankadindramamy, Analamahitsy, Andraisoro ary Mahatony Ivandry ny ekipan’ny boriborintany fahadimy, tamin’ity herinandro ity. Nanatona ireo rehetra manatanteraka asa fanorenana trano ny delegen’ny boriboritany sy ireo tompon’andraikitra avy ao amin’ny « Direction de l’urbanisme et du développement » (DUD). Tompon-trano maro an-dalam- panorenana kanefa tsy manana taratasy ara-dalàna no nomena […]
Rahampitso alahady : harotsaka ny orana artifisialy
Fifaliana ho an’ny mponina any Ambatondrazaka ny vaovao nambaran’ny talen’ny Meteo Malagasy. Handatsaka orana any an-toerana ny teknisianina rahampitso. Tsy mbola fantatra kosa na ho tonga eto Antananarivo izany na tsia. Rahampitso alahady vao ho feno ny fepetra hahafahana mandatsaka orana artifisialy eto afovoan-tany, raha ny filazan’ny talen’ny Meteo Malagasy. Handatsaka orana araka izany ny […]
Oniversite enina : nampitoviana ny fisantarana ny taom-pianarana
“Hitovy avokoa ny daty fanombohana ny taom-pianarana 2016-2017 ho an’ny oniversite enina, araka ny tapaka nandritra ny fivorian’ny filohan’ny oniversite enina sy ny minisiteran’ny Fampianarana ambony (Copries), tamin’ity herinandro ity”, hoy ny minisitra Rasoazananera Marie Monique, omaly teny Ivato. Ny volana febroary ny fandraisan’ny mpandraharaha sy ny mpampianatra ny asa raha iray volana aty aoriana […]
Fandraisana amin’ny fifaninanana : ny Master no manan-kery manomboka izao
15 ny hevitra tapaka nandritra ny Copries teny Fiadanana tamin’ity herinandro ity, anisan’ny zavatra nivoitra ny fandrindrana ny mari-pahaizana takina amin’ny fidirana amin’ireo sekoly ambony miankina amin’ny fanjakana, toy ny ENMG, Enam… Manomboka eto, ny maripahaziana Master no raisina hifaninana amin’ny fifaninanana samihafa. « Mbola hisy ny fepetra vonjimaika ho an’ny fifaninanana efa manakaiky ny daty […]
Ankasina sy Andavamamba : diovina ao anatin’ny 10 andro ny tanàna
Nidina tetsy amin’ny fanasan-damba etsy Ankasina nijery ny olana mianjady ireo mpanasa lamba ny ekipan’ny CUA. Tsy ampy ny toerana fanahazan-damba ka nanapa-kevitra ny kaominina hanadio ny toerana rehetra manodidina, sy ny lakandrano satria maloto loatra eny an-toerana. Tsy maharaka ny RF2 sy ny sefo fokontany, koa hanaovana asa tana-maro na (Himo) ny fanadiovana. Mandritra […]
Espace Maray : mikarakara vaky boky miaraka
Par Taratra sur 21/01/2017 NS Malagasy, NS-Culture
Hafakely ! Toeram-pampianarana dihy, sehatra ifanakalozana momba ity zavakanto ity ary toeram-pamoronana kanto ny Espace Maray eny Androndrakely, tantanin’i Julie Iarisoa. Mivelatra amin’ny zavakanto hafa koa anefa ny foibe. Manaporofo izany, mikarakara vaky boky miaraka ity mpanakanto ity, rahampitso maraina. Amin’io fotoana io, samy mitondra ny boky tiany hovakina ny tsirairay ary mifamotoana ao amin’ny Espace […]
Par Taratra sur 21/01/2017 NS Malagasy, NS-Politique
Lasa resaka tato ho ato ny amin’ny fivavahana sy ny fandraisana andraikitra amin’ny fanarenana ny firenena. Mila ny kristianina ny fanarenam-pirenana, raha ny vela-kevitry ny ny pretra Rakotoarison Hilarion. “Nahoana no tsy mahomby ny kristianina? Tsy mitsaha-midina ny fari-piainan’ny Malagasy tsirairay. Nefa samy kristianina na samy milaza azy ho izany avokoa ireo mpitondra.” Tenin’ny pretra […]
Malagasy miara-miainga : « Tsy sahy miady hevitra ny Praiminisitra »
Tonga teny amin’ny ORTM Anosy ny solontenan’ny Antoko Malagasy miara-miainga, omaly hanomana amin’ilay adihevitra tokony hataon’ny lehiben’ny mpanohitra miaraka amin’ny lehiben’ny governemanta isaky ny zoma fahatelon’ny volana janoary. « Hita taratra fa tsy sahy ary tsy vonona hanatanteraka izany ny fitondrana na efa nisy taratasy nalefan’ny antoko ho an’ny Praiminisitra sy teny anivon’ny ORTM, handefa mivantana amin’ny haino aman-jerim-panjakana […]
Paikady iadiana amin’ny kolikoly : manohana ny fanatanterahana ny UE
Firosoana sy ny vina amin’ny fanatanterahana ny fandaharanasam-pirenena amin’ny ady amin’ny kolikoly eto Madagasikara. Izay no anisan’ny voaresaka tamin’ny fitsidihana ara-pomba fifanajana ny tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean-Louis, nataon’ny ambasadaoron’ny Vondrona Eoropeanina (UE), Sem Antonio Sanchez-Benedito, teny foiben’ny Bianco, Ambohibao, omaly. Nanamafy àry ny ambasadaoron’ny UE amin’ny fanohanana ny fanatanterahana ny paikadim-pirenena iadiana amin’ny kolikoly, […]
Fandraharahana : tafatsangana ny « Métis production »
Tafajoro, tamin’iny faramparan’ny taon-dasa iny, ny “Métis production”, trano famokarana. Mampiavaka azy ity ny fisafidiany fanabeazam-boho sy fampiroboroboana ny mozika amin’ny tany mafana. Voasokajy anatin’izany rehefa mety ho gadona mihetsiketsika. Manana ireo fotodrafitrasa takin’ny hoenti-manatanteraka izany ny eo anivon’ny Métis Prod. Singanina amin’ireny ny trano fandraisam-peo sy fanaovana famerenana, izay nezahina hanaraka ny fenitra ireo […]
Mitaky fepetra maro ny mpamatsy vola : tsy maintsy nosoloina ny mpitantana ao amin’ny Jirama
Tonga amin’ny tsy maintsy asiam-panovana ny rafitra sy ny olona mpitantana ao amin’ny Jirama ankehitriny. Mitaky fepetra maro ireo mpamatsy vola ho fanarenana ity orinasam-panjakana ity, izay efa tsy zaka intsony ny fatiantoka mahazo azy ka ny vahoaka no miantoka. Mihisitra miaraka amin’izany ny toekarena rehefa mitsipozipozy ny famatsiana angovo. Taona maro no efa hita […]
« Adisanina FAN’dio » : hivoaka DVD sy VCD
Hiavaka ny tantara, satria mirakitra ny tena zava-nisy! Hivoaka an-kapila mangirana (DVD sy VCD) amin’ny 31 janoary izao, manerana ny Nosy, ilay tantara “Adisanina FAN’dio”, novokarin’ny Scoop Digital. Voarakitra ao anatin’ity sarimihetsika vaovao ity ireo tranga tena nisy sy niainan’ireo ekipan’ny Team Safelika nandritra ny fitetezam-paritra maro nataony. Ankoatra ny maha fialamboly ny sarimihetsika, hita […]
Betsaka indrindra ny an’ny Frantsay amin’ireo orinasa tantanan’ny vahiny eto Madagasikara. Ahitana orinasa goavana frantsay eto, ohatra, Air Liquide, Bouygues, Orange, Lafarge, Société Générale, Vivendi, Total. Manampy an’ireo orinasa any amin’ny sehatra maro, fizahantany, faritra afakaba, sns. Noho izany, ilaina ny fiaraha-miasa eo amin’i Frantsa sy Madagasikara. Manome lanja ny fiaraha-miasa amin’ny indostria malagasy hatrany […]
Toamasina : voasambotry ilay lehilahy mpisoloky momba ny hetra
Saron’ny polisy misahana ady heloka momba ny ekonomika tao Ambohijafy Toamasina, afakomaly ny mpisoloky avolenta antsoina hoe Rasolonandrasana Henri… Mpisoloky gagilahy momba ny hetra ity lehilahy voarohirohy ity, araka ny fanazavan’ny polisy. Mpivarotra maromaro manerana ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo ary tao an-drenivohitr’i Toamasina no efa nitondra faisana tamin’ity lehilahy ity. Niainga avy amin’ny fitarainana […]
Fiarovana ny tontolo iainana : namboly hazo ny Ensoa sy ny Akademia Miaramila
“Fandraisana anjara amin’ny fiarovana ny tontolo iainana izao hetsika ary efa fanao isan-taona. Efa misy mihitsy ny miaramila natao hikajy ireo hazo nambolena mba tsy ho fombafomba fotsiny izany”, hoy ny lefitry ny kaomandin’ny Akademia Miaramila, ny Kolonely Ralaibeza, nandritra ny fotoam-pambolen-kazo tao Antsirabe omaly. Zanakazo miisa 2 000 fototra no nambolen’ireo vondron-tafika ao Antsirabe izay […]
Antsirabe : ankizy tsy ampy taona manendaka
Mitaraina ny mponina any Antsirabe fa mirongatra ny asa fanendahana. Ankizy mbola tsy ampy taona manodidina ny 15 taona eo ireo voalaza fa manendaka. Ramatoa iray nandeha bikileta posy tratran’ny sinto-mahery tany Antsenakely, ny alarobia atoandro teo. Mba nahavoatazona ny kitapony ilay ramatoa sady niantso vonjy. Nitazam-potsiny anefa ny olona nahita izany. Raha ny filazan’ny […]
CSAEM : « Miandry ny vahoaka… »
Par Taratra sur 21/01/2017 Divers, NS Malagasy
« Efa hita taratra ny finiavann’ny mpitondra hanova saingy andrasana ny fanatanterahana izany ary miandry ny vahoaka, indrindra ny mpiasam-panjakana », hoy ny Fivondronamben’ny sendiko sy ny mpiasam-panjakana (CSAEM), omaly tetsy 67 ha. Anisan’ny nitarika izany ny filoha nasionaly, Rakotondrainibe Simon Richard ary nampahatsiahy fa maro ireo fahalovana. « Mitohy ny fampidirana ny resaka politika eny anivon’ny asa-panjakana. […]
Manantombo i Madagasikara noho ny maha Nosy azy, fananany morontsiraka mirefy hatramin’ny 5000 km. Io valan-dranomasina io azo lazaina fa iankinan’ny toekarena, miainga avy amin’ny fitaterana an-dranomasina. 90 % -ny fifanakalozana ara-barotra maneran-tany miankina amin’ny fitaterana an-dranomasina ; avy amin’io koa ny miantoka ny 95 % ny fifandraisana. Izay “ny toekarena an-dranomasina”, toekarena fototra sy […]
Par Taratra sur 21/01/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Efa endriky ny korontana na fipoahana sosialy ny zava-mitranga ao Vangaindrano? Fitakiana fitsaram-bahoaka, niafara tamin’ny fandroban’ny mpanararaotra nandoro trano. Resaka hatramin’izay ny hoe tsy fahatokisan’ny vahoaka intsony ny mpitandro filaminana, mpitsara; ny fitondrana ankapobeny, raha ny marina. Fari-toe-javatra nanetsika ireo mpiray Dina ny fisian’ny lehilahy namono ilay tovovavy tany an-toerana. Na inona endri-javatra toy izany, […]
« Précédent 1 … 1 034 1 035 1 036 1 037 1 038 … 1 364 Suivant »